Posted by အင်ကြင်းသန့် at 10:00 AM
ငါ့ညီမ...ကိုယ်စားရေးပေးလို့သာပဲ။ အဲလိုသာ မပြောထားလို့ကတော့ ဟွန်း... ကိုယ်တိုင်ခံစားရေးဖွဲ့ထားတယ်လို့ပဲ ထင်ပလိုက်မှာ။ :P
“ကိုယ့်ရင်ခွင်အိုအေစစ်ဝယ်၊ ချွေးသိပ်ရစ်ကွယ်” ... ချစ်စရာအဖွဲ့လေး။း)
That's lovely poem and you did great job. We can imagine with your poem. Your are Heroine because you want to prevent every season to your belove person. (That's so cute composing) If we believe about the love, we can cross over from any difficult things with this love. Is it??? (hee hee :P) I like summer paragraph,that's so nice for me. :)
ကဗျာကပီပြင်တော့ ကိုယ်စားခံစားတာမှ ဟုတ်ရဲ့လား တွေးနေမိသေးတယ်။ အဖွဲ့အနွဲ့လေးက နုနုရွရွ လှလှပပ လေးတွေပါပဲ။
(တခုပဲ..စီဗုံးမရှိတော့ ဘယ်မှာအော်ရမှန်းမသိဘူး :D)
ညီမလေးက ကဗျာရေးလည်း တော်တာကိုး...း)
သုံးရာသီအလှ သဘာဝနဲ့ အချစ်ကို တင်စားပြီး ရေးဖွဲ့ထားတာလေ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ညီမလေးရယ်.. တော်တယ်နော်..
နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေး ထဲကစာသားတွေ သဘောကျမိပါရဲ့... သစ္စာရှင်မလေးပေ့ါ..း)
အင်ကြင်းေ၇ ငါ ကတော့ နင်ေ၇းတဲ့စာတွေ ထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး ကို ပြောပါ ဆို၇င် ကဗျာတွေ လို့ ပဲဖြေလိုက်မယ်
နင်ေ၇းတဲ့ကဗျာ တွေ အားလုံးကို ငါ အ၇မ်း ကို ကြိုက်တယ်...
ချမ်းသမျှ အကုန်ရပ်စေရမယ်...။ ။ကိုယ့်ရင်ခွင်အိုအေစစ်ဝယ်
အင်ဂျင်နီယာမ ဘ၀တစ်ဖြစ်နဲ့ ကဗျာဆိုတာကိုလည်း လှလှလေနဲ့ ဆောက်တည်တတ်တာပဲနော်။း)
ရင်တွင်းခံစားချက်ကို ကိုယ်စားခံစားလိုက်တာမဟုတ်လား.။ မညာနဲ့နော်.။ စီဗုံးမရှိတော့ လာအော်ဖို့က ဂွကျနေတယ်။
အလွန်လှတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ၊ မိုးဆောင်းနွေ ရာသီများနှင့် ကမ္ဘာပျက်တဲ့ထိဆိုတော့ ပျော်စရာကဗျာ လေးဖြစ်မှာပါ၊ သီချင်းလေးကထပ်ကူဆိုတော့…………
ကောင်းတယ်။ ကဗျာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး။
ဒီလို တွေပဲ ဖြစ်နေစေချင်တယ်
ဂျင်းက ကဗျာ ပိုပိုင် သလိုပဲနော်။
ရင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ခံစားချက်
ငါ့ညီမ ဒီလောက်တော်တာ ခုမှဘဲသိတော့တယ်
ချစ်စရာကဗျာလေးကို ချစ်ခင်စွာ ဖတ်ရှုရင်း
ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖွဲ့အနွဲ့လေးပါ ဂျင်းရ ...
အဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ ကဗျာတွေက ကောင်းပါတယ် .. ရေးပါလို့ဆိုတာ ...
ခရီးထွက်ရင်ကြိုပြောနော် ... ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှာ အပ်ပေးမယ် .. အဟီး ..း)
ယုံဘူး ဂျင်ဂျင်းလေး အမဆီကို ခေါ်လာပြအုံး...ဒါပဲ...ကဗျာလေးက ဂျင်ဂျင်းလိုပဲ ချစ်စရာလေး...:)
ကဗျာလေး က တကယ်ကောင်းပါတယ်..
ကဗျာရေးသူလေးရဲ့ အချစ်ကတော့ စံတင်လောက်ပါပေတယ်နော်
တကယ်ကို တော်တဲ့ ကိုယ့်ညီမပါဘဲ အမောလေးတွေကို ပြည်သွားတာဘဲ.
ချွေးသိပ်ရစ်ကွယ်...။ ။ အင်ကြင်းရေ......ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေးအရေးပဲ။ ရင်ထဲကိုထိသွားတာပဲ....
နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ အမှတ်တရ လာနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးနော်..
ညီမအတွက် မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ကူး ဖြစ်ပါစေနော်..
ဆင်တဲကနေလမ်းကြုံတာနဲ့ လှဲ့ဝင်ခဲ့တယ်ဗျာ ကဗျာကြိုက်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကဗျာလေးကို အပြတ်ခံစားသွားတယ် ဒီထက်မက ကဗျာကောင်းတွေ အများကြီး တင်ပေးနိုင်ပါစေဗျာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ...............z@wko
ဘယ်လို အိုအေစစ်လိုရင်ခွင်မျိုး ဟိဟိ
အစ်မရေ လာခဲ.ပါတယ် စာသားလေးတွေ အရေးအရမ်းကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်ကတော. ရေးချင်ပေမယ်. မအားတာရယ် စိတ်ကူးမထွက်တာရယ် အရေးအသားအတွေ.အကြုံမရှိသေးတာရယ် လိုအပ်နေသေးတယ်အစ်မ...ပျော်ရွင်ပါစေအစ်မ...